साउनदेखि बृद्ध भत्ता बढ्नेः उल्टा कुरा नगर्न दाहाललाई प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी – सगरमाथा खबर
साउनदेखि बृद्ध भत्ता बढ्नेः उल्टा कुरा नगर्न दाहाललाई प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षाभत्ता साउनदेखि बढाउने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षाभत्ता साउनदेखि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँछु भन्दा कसैलाई आपत्ति हुन सक्ने बताए । अब कसैलाई आपत्ति लाग्ला । बूढाबूढी पनि हेर्न थाल्यो, अपांग हेर्न थाल्यो । यो सरकार छिटो हटाउनुपर्‍यो । मान्छेहरूलाई भरैबाट यो छटपटी हुन्छ । निद्रा लाग्दैन ओलीले भने ।
ओलीका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको छिट्टै शिलान्यास गरिनेछ । बर्दिवास जयनगर रेल सेवा सञ्चालनको तयारी छ। केरुङ काठमाडौं, काठमाडौं रक्सौल जोड्ने रेलमार्ग निर्माण हुने ओलीले बताए ।
उनले देशमा विकास तीव्ररूपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै दैनिक १० किलोमिटर सडक बनिरहेको दाबी गरे। हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुगिसकेको उनले सुनाए। हुम्ला सदरमुकामलाई छिट्टै सडक सञ्जालले छुने जानकारी उनले दिए । उनले प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रमा पक्की सडक विस्तार गर्ने अभियान थालिएको बताए ।
उनका अनुसार पाँच हजार विद्यालय पूर्वाधार विकासमा पाँच अर्ब वितरण गरिनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास तीव्र रूपमा भइरहेको उनले बताए। हुलाकी राजमार्गको पनि ९० प्रतिशत काम सकिएको उनको भनाइ थियो । उनले समृद्धि नारा मात्र नभएर सरकारको गन्तव्य भएको बता ए।
उनले कोरोनाविरुद्धको खोप सम्पूर्ण जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । ‘सरकारले निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गरायो, कोरोनाको उपचार गरिरहेको छ । सम्पूर्ण जनतालाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा पनि गरिसकेको छ’, उनले भने ।
ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उल्टापाल्टा कुरा नगर्न आग्रह गरे । पार्टी एकताकै बेकारको कुरा डबलीमा गर्दै हिँडेको उनको भनाइ थियो ।
नेकपा खारेज गरेको विषयमा दाहालले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावेदनप्रति संकेत गर्दै ओलीले अदालतले पार्टी मिलाइदिने हो र भन्ने प्रश्न गरे । उनले निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी दर्ता गर्न सुझाए। ‘निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी दर्ता गर्न कसले रोकेको छ ?’, रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘अनि अदालतमा पार्टी एउटै गरिपाऊँ भन्ने ? अदालतले गरिदिने हो पार्टी एकता ? पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो ?’ ऋषि कट्टेललाई अदालतले न्याय दिएको उनले बताए ।
जसपा फुटको संघारमाः ठाकुर र यादव को सँग सांसद कति ?
नेकपा नामको विवादमा फैसला आउने मिति सर्वोच्चमा पर सर्यो
नेकपाको दाहाल-नेपाल खेमाले पदको बाडफाड
काठमाडौंका सबै सरकारी अस्पताल कोभिड १९ बनाउने सरकारको निर्णय
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नआए कारवाही गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी
पुरानै नक्सा छापिएको पुस्तक जफत गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन